Isandi sokuThula nguSimon & Garfunkel - Izinto Zobugcisa
Ukurekhodwa kokuqala yayiyinguqulelo ye-acoustic kwi-albhamu yokuqala kaSimon & Garfunkel, NgoLwesithathu ekuseni, ngentsimbi yesithathu ekuseni , eyabizwa 'njengezandi ezitsha ezinomdla kwisithethe sabantu,' kwaye yathengiswa malunga neekopi ezingama-2000. Xa i-albhamu itanki, uPaul Simon kunye noArt Garfunkel bahlukana. Into ababengayazi kukuba inkampani yabo yokurekhoda yayinesicwangciso. Ukuzama ukusebenzisa intshukumo yamatye, i-Columbia Records yayinomvelisi uTom Wilson ongeze izixhobo zombane kwi-acoustic track, kwaye wayikhupha njengoyedwa. USimon noGarfunkel babengazi ukuba ingoma yabo ye-acoustic yayigqityiwe ngezixhobo zombane, kodwa yaba yinto enkulu kwaye yababuyisela ndawonye. Ukuba uWilson akazange ayisebenzise kwakhona ingoma ngaphandle kolwazi lwabo, i-duo ngekhe yahamba ngeendlela zabo ezahlukeneyo. Xa ingoma yabetha # 1 eMelika, uSimon wayeseNgilani kwaye uGarfunkel wayesekholejini.
UPaul Simon wayekhangela isivumelwano sokushicilela xa wayethetha le ngoma kuTom Wilson e-Columbia Records. UWilson wayecinga ukuba ingasebenza kwiqela elibizwa ngokuba ziiPilgrim, kodwa uSimon wayefuna ukumbonisa ukuba ingasebenza njani neemvumi ezimbini, ke yena noArt Garfunkel bayiculela abafana baseColumbia Records, abathi bachukumiseka yile duo kwaye bagqiba kwelokuba zisayine.
UPaul Simon uthathe iinyanga ezintandathu ukubhala amazwi, athetha ngokungabikho konxibelelwano nomntu.
Kudliwanondlebe noTerry Gross weNational Public Radio (NPR), uPaul Simon uchaze indlela ayibhale ngayo ingoma ngelixa wayesebenza emsebenzini wakhe wokuqala emculweni: 'Kwakungoko ndiphumayo ekholejini. Umsebenzi wam yayikukuthatha iingoma ezazinenkampani enkulu yokushicilela kwaye ndijikeleze iinkampani ndize ndibone ukuba akukho namnye na kumagcisa azo ofuna ukurekhoda iingoma. Ndabasebenzela iinyanga ezintandathu kwaye khange ndibeke ngoma, kodwa ndibanike iingoma zam ezimbalwa kuba ndiziva ndinetyala ngokuthatha imali yabo. Emva koko ndaphikisana nabo ndathi, 'Jonga, ndiyekile, kwaye andikuniki ingoma yam entsha.' Kwaye ingoma endandisandula ukuyibhala 'Sisandi Sokuthula.' Ndacinga, 'ndiza kuyipapasha ngokwam,' kwaye ukusukela ngelo xesha ndaye ndaneengoma zam, ke leyo yayiyimpikiswano enethamsanqa.
Ndicinga ngeengoma ukuba ayisiyiyo le nto ithethwa ngamagama kuphela kodwa ithiwani ingoma kunye nokuba sithini isandi. Ukucinga kwam kukuba ukuba awunaculo olululo, ayinamsebenzi into oyithethayo, abantu abayiva. Zifumaneka kuphela ukuva xa kungena isandi kwaye kwenza abantu bavuleleke kwingcinga. Eyona nto iphambili 'Isandi sokuThula' kukulula kwengoma kunye namagama, okwahlukanisa ulutsha. Ingoma encinci, kodwa ayimbi kumntwana oneminyaka engama-21 ubudala. Ayisiyongcinga ephucukileyo, kodwa yingcinga endiyibuthele kwinto yokufunda ekholejini okanye enye into. Yayingeyonto endandihlangabezana nayo kwinqanaba elithile elinzulu, elinzulu- akukho mntu undiphulaphulayo, akukho mntu uphulaphuleyo nakubani na - yayiyinto yasemva komntwana ofikisayo, kodwa yayinenqanaba elithile lenyaniso kuyo kwaye yahlangana nezigidi zabantu . Kakhulu kuba ibinomculo olula noculekayo. '
Le yayiyenye yeengoma zikaSimon & Garfunkel ezaziculwa ngo-1964 xa babeqala nokudlala iiklabhu zabantu eGreenwich Village. Yayikukuqala kwabo ukubethwa.
UPaul Simon wayehlala ethelekiswa noBob Dylan, owayesayinwe kwiColumbia Records, kwaye ngelixa uSimon evumile impembelelo kaDylan 'Isandi Sokuthula,' akazange azame ukufikelela kuDylan. USimon uxelele UMojo Ngo-2000: 'Ndizamile kakhulu ukuba ndingaphenjelelwa nguye, kwaye bekunzima oko. 'Isandi Sokuthula', endisibhalileyo xa ndandineminyaka eyi-21, ngekhe ndibhale ukuba kwakungekho ngoBob Dylan. Akunakuze, wayengumfana wokuqala ukuza ngendlela enzulu eyayingengoma yolwimi yeshumi elivisayo. Ndimbonile njengomfo ophambili umsebenzi wakhe ndingafuni ukuwuxelisa. '
Kukho uqhagamshelo lukaDylan kule ngoma: Inguqulelo yombane yaveliswa nguTom Wilson yagqitywa nguBob Johnston, kwaye omabini la madoda asebenza noDylan. UWilson wayengumvelisi kaDylan malunga neminyaka emibini ukusuka ngo-1963, kwaye wanceda uDylan ukuba enze utshintsho ukusuka kubantu be-acoustic baye kwidwala lombane. UWilson uqhubeke nokusebenza neVelvet Underground kwaye kamva waba ngumlawuli wenkampani erekhodayo. UJohnston wayengumvelisi kaDylan kude kube ngo-1970.
Oku kusetyenziswa kwi movie Abaphumeleleyo . Umlawuli wefilimu, uMike Nichols, wayibeka njengengoma yomsebenzi kwaye wayeza kuyitshintsha, kodwa njengoko ifilimu yayihlangana kwaye kwacaca ukuba ingoma yayiyifanelekile ifilimu. UNichols akazange ayisebenzise nje le ngoma, kodwa waziva ukuba uSimon noGarfunkel banesandi esifanelana kakuhle nethoni yemovie. Babayalela ukuba babhale 'Nksk.Robinson' ngakumbi umboniso bhanyabhanya, kwaye bongeze 'iScarborough Fair' kunye 'no-Epreli Yiza Uya' kwifilimu.
Oku kunentsingiselo eninzi kumdlalo bhanyabhanya Abaphumeleleyo . Amagama abhekisa kukuthula njengomhlaza, kwaye ukuba abantu kwi-movie babenyanisekile kwaye bengoyiki ukuthetha, zonke izinto ezimbi zazingazukwenzeka. Iingxaki zinokusonjululwa kuphela ngokunyaniseka.
USimon & Garfunkel akazange abhale oku malunga neMfazwe yaseVietnam, kodwa xa yayisaziwa, imfazwe yayiqhubeka kwaye abantu abaninzi baziva ngathi yenza ingxelo enamandla njengengoma yokulwa imfazwe.
E-US, oku kwabetha # 1 ngoSuku loNyaka oMtsha, ngo-1966.
Umgca wokuvula, 'Molo wobumnyama, mhlobo wam wakudala,' wavela ngexesha likaSimon xa wayeyinkwenkwe xa wayecula kwigumbi lokuhlambela kucinywe izibane, onwabele ii-acoustics ezivela kwiithayile ezazibonelela ngesandi se-doo-wop.
NgoFebruwari 23, 2003, uSimon noGarfunkel baphinde badibana okokuqala kwiminyaka eli-10 ukwamkela ibhaso lokuphumelela ebomini kwaye bakwenza oku xa kuvulwa iGrammys. Ngelo xesha, i-US yayilungiselela ukuhlasela i-Iraq, kwaye ngelixa oku kunokuviwa njengengxelo yezopolitiko, uSimon wathi yayingeyiyo. Ucacisile ukuba bafuna ukudlala le nto kuba ibikukuqala kwabo ukubetha.
Kumawonga eGrammy ngo-1967, uSimon & Garfunkel baziswa nguDustin Hoffman, owazenzela igama xa edlala indawo Abaphumeleleyo . Kwakungekho mphathi kwi-Grammys ngaloo nyaka, ke uHoffman wayengumntu wokuqala ukubonwa xa kuvulwa umboniso.
Ngaphandle kokuthandwa kwayo, IBlender uvotele le ngoma ye-42 yeyona imbi kakhulu, ethetha ngokulusizi esithi 'Ukuba uFrasier Crane ebeyingoma, ebeya kuvakala ngoluhlobo.' Umhleli weli phephancwadi, uCraig Marks, usikhusele isigqibo sikaBlender sokufaka le ngoma ithandwa kakhulu kuluhlu lwabo, esithi: 'Yimbongo entsha enentsingiselo efumene ibhokhwe yethu, eneengoma ezibaluleke ngathi' yiva amazwi am ukuze ndikufundise. '. Inqaku elifutshane ngengoma ehambelana nale ibizwa ngokuba 'yiva amazwi am umgca' eyona ibaluleke kakhulu ... baphinde bashukuma kwaye bahlunguzela iminwe yabo njengoko becula. Amava onke afana nokufundiswa ngentsingiselo yobomi ngumntu omtsha oqaqambileyo.
Ibhendi kaGregory yakugubungela oku kwi-albhamu yabo IiMasters zeNgoma - njengengoma kaGregory. Ungaze uphinde uyigubungele kwi-albhamu Intliziyo efileyo KwiLizwe eliFileyo , kunye neqela laseJamani iAtrocity bayigubungela kwi-albhamu yabo ka-2000 IGemini . Ngokumalunga nomgangatho wenguqulo yabo: Abantu abaninzi baziva ukuba igama leqela belifanelekile.
IBrett-Edmonton, Canada, ngaphezulu kwe-2
Oku kusetyenziswa kwi movie Isikolo esidala kwimeko apho uWill Ferrell ewela echibini.
UJoel Riley -Berkley, MI
I-Bachelors, iqela elinezandi ezintathu ezivela e-Ireland, lirekhode oku ngo-1966 laza labetha # 3 e-UK ngenguqulelo yabo. Inguqulelo kaSimon & Garfunkel ayikhange ikhutshwe njengeyodwa eNgilane.
Le ngoma yahlanganiswa ngomculo IiSimps Kwisiqendu sesihlanu sonyaka 'Umthandi kaLady Bouvier.' Isiqendu sonke sifana kakhulu Abaphumeleleyo , kunye nohlobo lweSimpsons ludlala ngaphezulu kwekhredithi, emva kokuba uTatomkhulu noNksk. Bouvier beshiye icawa njengoBenjamin noElaine kwimidlalo bhanyabhanya.
KwaYuda-eSan Francisco, CA
UPaul Simon wayengasoloko ekonwabela ukwenza iingoma zakhe ezindala, njengoko wayenobunzima ekunxibelelaneni neengoma awayezibhale kumashumi eminyaka ngaphambili. Lo yayingumthombo wengxabano kwaba babini, kuba uArt Garfunkel wayeziva ukuba uninzi lweengoma zabo ezithandwayo zazisasebenza, kwaye abaphulaphuli babo bafuna ukukuva. UGarfunkel wacacisa kudliwanondlebe luka-Paul noPaul Zollo ngo-1993: 'Ndifuna' Isandi Sokuthula 'sibe nomsindo ekugqibeleni ngokungathi lixesha. Abampofu bayakhala, 'F - k le nkqubo ingalunganga,' kanye njengokuba bebehlala beyikhwaza. Yinto engenasiphelo. Iyaphila, ukuba ungayenza iphile, eqongeni ngokuhlwanje njengoko yayinjalo xa kwakubhalwa ngo-'64. '
Kukho ingxelo eyodwa kuphela yoma ingoma yokwenza i-US Hot 100: ukukhutshwa ngo-1971 nguPeaches kunye noHerb abenze # 100. Ezinye izimbozo eziphawulekayo yinguqulelo ye-Metal eyandisiweyo ngo-Nevermore kwi-albhamu yabo ka-2000 Intliziyo efileyo kwiLizwe eliFileyo , kunye nenguqulelo yango-1996 yimvumi yaseIceland uEmiliana Torrini.
USimon & Garfunkel benze oku kuNeil Young kwiSikolo seBhulorho ngo-1993 kunye noEddie Van Halen ebaxhasa kwikatala.
Ibhendi yensimbi enzima ephazamisekileyo yabamangalisa abalandeli babo ngokugubungela le ye-2015 yabo Ukungafi icwecwe. Guitarist UDan Donegan uthe abafuni ukufihla ilizwi lomculi uDavid Draiman 'ngamagita amakhulu, ahlaselayo kwaye agqwethayo' kuhlobo lwabo. Wongeze wathi: 'Sifuna ukubonisa ukuba sesichengeni kwakhe kwaye sithathe indlela yasekhohlo. Imitya kunye neevayoli ziyayenza nzulu. Yinto enokubothusa abantu kuba sihambe ngendlela entsha ngokupheleleyo. Senze oko siziva silungile kwaye sawubona umbono. '
Ikhutshwe njengelinye, ikhava ephazamisekileyo yaba yingoma yabo ephezulu yokutshata kwi-Hot 100, ikhokelela kwi # 42. UDraiman uxelele Ijenali yeWall Street ukuba 'akanakuba sathabatheka ngakumbi' yimpumelelo yeqweqwe labo. Wongeze wathi: '[Ingoma] enokudlalwa ngabazali bam ngokuzidlalela abahlobo babo ngokuzingca ngaphandle kokubalumkisa ukuba bangoyiki kwangaphambi kwexesha. Ndinabalandeli abathi, 'Ekugqibeleni, mna nomama sinokuvumelana ngomculo kube kanye!' '
UPaul Simon uvumile inguqulelo ephazamisekileyo emva kokuba ibhendi ihambise ukudlala umculo wakhe ngexesha labo Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2016 ukubonakala kwiConan . USimon uthumele uDavid Draiman i-imeyile kungekudala emva koko, esithi, 'Kukusebenza ngenene Conan olunye usuku. Ngethuba lokuqala ndikubonile uyenza bukhoma. Intle. Enkosi.'
Oku kubonakala njengehlaya elibalekayo kuthotho lweTV Uphuhliso olubanjiweyo Ukubonisa isiphithiphithi sangaphakathi sikaGob Bluth (Ngaba uArnett).
Ngo-Epreli 2016, oku kwavela kwi # 6 kwitshathi yeengoma zeBillboard Hot Rock kunye # 2 kwitshathi yeengoma zokuSasazwa kweengoma ubukhulu becala sibulela kudumo ' Usizi Affleck meme. Kwiiveki ezimbalwa ngaphambili, uBen Affleck noHenry Cavill babenodliwanondlebe malunga nefilimu yabo UBatman V Superman: Ukuqala koBulungisa kwaye babuzwa malunga nokuphononongwa kwayo okungaphakathi. Ukuthula okungathethekiyo kuka-Affleck kuphefumlele i-YouTuber ukuhlela ividiyo nge 'Isandi Sokuthula' isandi sokuphendula kwakhe.
UPaul Simon waphosa imvumi yesintu uOdetta ngengoma yamandulo yale ngoma ekupheleni kuka-1964 / ekuqaleni kuka-1965. Wayikhaba.
Iyintoni intsingiselo yengoma emhlophe emhlophe?
sukujika oh oh amazwi omculo
Inombolo yeengelosi ezingama-6666 ilangatye
yonke into ebengezelayo yigolide etshiza umlomo
ray charles andazi lyrics
Iholo kunye ne-oates uhambile lyrics